Induction Brazing Brass Studs to Pipes Process Technology
Brauze brauzed braids ọla kọpa
Onye na emeputa coils maka ngwa kpo oku nke ulo oru.
DW-UHF-40KW Sistem Induction brazing Systems - modulu abụọ.
Materials: Brass stud (nha: 25mm n'obosara, 20 mm elu)
Isi nsogbu n'oge a usoro nkwado braduction bụ ịgba mbọ hụ na e mepụtara coil bụ ihe na - eme ka onye na - ahụ maka ọrụ dozie ya n'ụzọ kacha adaba. Igwe ihe omumu induction kwesịrị ikwe ka ụlọ nke abụọ dị ọkụ tupu agbaze nke mbụ.
Nke mbu, akuku electrolytic na aru onwu nke bu oku na oku mgbe enwere ike idozi uzo di n'etiti uzo. Mgbe ahụ, ntụgharị ọla kọpa dị ọkụ na nso ọnọdụ achọrọ ma mgbe ike dị, onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na ọ na-edozi aka ya na brass mgbanaka na mgbanaka nkwado na etiti ahọpụtara. N'ime usoro brazing, eriri ntinye na-agagharị na ọsọ nke 58 mm kwa nkeji - 33 kW.
Ọ bụrụ na ike abawanye, ọsọ a na-agbanwe ya.
Ọsọ, dị ọcha ma nweghị nsogbu ume nkwado usoro
Na-ekwe nkwa ikwugharị
Categories Technologies Tags ọla ọcha studs brazing, ọla nchara, brazing ọla, ọla kọpa na -akpata ọla kọpa, Ejiri ike brazing nke ukwu, brauza induction, brazing brass brave, mgbanaka na-emepụta ọla kọpa, usoro ọla kọpa na-emepụta ihe, akụrụngwa bradu ngwaọrụ, usoro induction brazing usoro, induction brazing nkeji Mail igodo
usoro induction brazing steel tubing usoro